10 Meelood ee Ugu Fiican Dalxiiska Australia | Safarka Absolut
Australia waa dhul aad u baaxad weyn oo ku xeeran badweyn, waa dalka lixaad ee ugu weyn adduunka oo leh bed dhan 7.686.850km oo laba jibbaaran, oo aan ku dareyno aagga jasiiradeeda. Sida dad badani og yihiinna dadkeeda badankood waxay ku saleysan yihiin magaalooyinka xeebta ku teedsan, iyo xiisaha loo qabo, Confederation of Australia wali waa boqortooyo dastuuri ah, oo leh nidaam baarlamaan oo dowladeed, taas oo boqoradda Elizabeth II ay hadda madax ka tahay gobolka Australiya ayna isticmaasho. cinwaanka rasmiga ah ee Boqoradda Australia.
Haddii aad go'aansatay in qaybtan adduunku ay tahay halka aad u socoto, Waxaan ku siinayaa 10-ka meelood ee ugu sareysa ee aadan tabi karin safarkaaga si aad ugu raaxaysato dalxiiska Australia. Samaynta liis waan kuu sheegi doonaa waxay yihiin:
Wadada Weyn ee Weyn
Beerta Qaranka ee Kakadu
Oo hadda waxaan u soconnaa, mid mid:
1 Sydney, gacanka furitaanka Australia
2 Cairns, meesha ugu caansan ee la tago
3 Xeebta Gold, xeebta ugu fiican ee lagu fuulo
4 Jasiiradda Fraser, oo ah Goob Dhaxal Adduun
5 Jasiiradda Magnetic, oo ah jasiiradda wax ka beddelka kumbuyuutarrada
6 Jasiiradaha Whitsundays, ama xayndaabka xayndaabka weyn
7 Ayers Rock, dhagaxii shisheeyaha
8 Jidka weyn ee badda
9 Xadiiqadda Qaranka ee Kakadu, sawir gacmeedyadii ugu da'da weynaa ee aadanaha
10 Tasmania, dalxiiska dalxiiska
Sydney, gacanka furitaanka Australia
Gacanka of Sydney Waa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan Australia, waana albaabka dhabta ah ee waddanka laga soo maro. Caasimaddu waa magaalada ugu dadka badan waxaana la aasaasay 1788.
Qaar ka mid ah meelaha aadan seegi karin magaaladan cosmopolitan-ka, oo leh nolol-habeennimo ballaadhan oo ku tiirsan aagagga Newtown iyo Annandale, ayaa ah opera, astaantaas la dhisay 1973 taas oo aan ku kala garanayno magaalada, hoolka magaalada, Hall Recital Hall, Tiyaatarka Gobolka, Tiyaatarka Royal, Tiyaatarka Sydney iyo Tiyaatarka Wharf.
Marka laga soo tago booqashooyinkan dhaqameed, waxaan kugula talinayaa qorrax dhaca qorraxda ee Buundada Bay iyo aquarium-keeda.
Cairns, meesha ugu caansan ee la tago
In kastoo Cairns ay tahay magaalo yar, sanadkiiba waxay qaabishaa qiyaastii 2 milyan oo dalxiisayaal ah, waana meel ay aad u jecelyihiin ajaanibta sababo la xiriira cimilada kuleylka iyo u dhawaanshaha Great Barrier Reef in ka yar saacad doon, Daintree National Park iyo Cape Dhibaato, qiyaastii 130 kiiloomitir.
Tani waa meesha lagu taliyay in laga bilaabo dalxiiska Australia oo laga bilaabo halkan waddooyinka loo maro Cooktown, jasiiradda Cape York iyo Atherton Plateau.
Xeebta Gold, xeebta ugu fiican ee lagu fuulo
Gold Xeebta waa magaalo lafteeda, iyo sidoo kale aagga xeebta quruxda badan iyo hirarka waawayn ee ku habboon korjoogsiga Baasifigga. Badbaadiyeyaashu wax badan ayey ka ogaan doonaan arrintan, laakiin waxay dhaheen Snapper Rocks Superbank, oo u dhow Coolongatta, wuxuu lahaa qaar ka mid ah hirarka adduunka ugu sarreeya. Waxa kale oo aad ku joogsan kartaa Currumbin, Palm Beach, Burleigh Heads, Nobby Beach, Mermaid Beach iyo Broadbeach. Si aad uhesho hirar nadiif ah oo aadan buux dhaafin, Xeebta Sunshine waxaa lagugula talinayaa Caloundra, Moolooloba, Maroochydore, Coolum Beach iyo Noosa Heads, halkaas oo keymaha ay gaaraan cirifka xeebta.
Jasiiradda Fraser, oo ah Goob Dhaxal Adduun
Jasiiradda Fraser waxay ahayd Goob Dhaxal Adduun tan iyo 1992, waana jasiiradda ugu badan ee ciidda adduunka ku taal oo leh 1.630 kiiloomitir oo laba jibbaaran. Magaceeda oo ku qoran afka Aborijiniska, K'gari macnaheedu waa janno, oo sidaad u maleyn karto inay tahay. Iyada oo leh nidaam deegaan oo u gaar ah, dalxiiska horumaray wuxuu ilaaliyaa soo jiidashada iyo nooleynta jasiiradda. Haddii aad booqanayso, waxay ku siin doonaan tilmaamo taxane ah intaad halkaa ku sugan tahay, sida inaadan quudin dingo-ka. Xaqiiqdii, halkudhigga jasiiraddu waa inta aad ku sii sugnaato, joogitaankaagu waa inuu noqdaa mid aan muuqan oo aan waxyeello u geysan intii suurtagal ah.
Jasiiradda Magnetic, oo ah jasiiradda wax ka beddelka kumbuyuutarrada
Magaceeda Magnetic Island wuxuu ka yimaadaa goorma James Cook sanadkii 1770 wuxuu ogaaday in markabka markabkiisa la badalay markii uu ag marayay, wuxuu ugu yeeray "saameynta magnetic", tan iyo markaas asalka dhacdada waa la baaray, laakiin wax sharaxaad ah lama helin. Shakhsi ahaan, waxaan u maleynayaa in "saameyntan magnet" ay ka imaaneyso 23-da xeebood iyo 300 oo maalin oo qorax leh sanadkiiba, yaa u oggolaan maayo inay iyaga ama koalasku soo jiidan karaan? Waana in in ka badan kalabar jasiiradda lagu dhawaaqay beero qaran, si loo ilaaliyo xayawaanadan.
Jasiiradaha Whitsundays, ama xayndaabka xayndaabka weyn
Jasiiradaha 'Whitsunday Islands' waa koox ka kooban 74 jasiiradood oo xuduud la leh xeebta weyn ee loo yaqaan 'Great Barrier Reef', iyo biyaha la ilaaliyo ee badda bari, qaar ka mid ah kuwani waa silsilado ciid aad u fiican oo aad u fiican, oo ay isku hayaan xididdada geedka timireed oo keliya.
Jannadan kulaylaha ah ayaa ah meesha loogu talagalay jacaylka ugu badan ee soo jeedinta guurka iyo bisha malabkii mitirkiiba, sidaa darteed haddii aad qorsheyneyso inaad la safarto lammaanahaaga horeyba waad u ogtahay waxa u dhigma. Aborigines ee jasiiradaha waa Ngaro kuwaas oo ka mid ah kuwa ugu da'da weyn ee laga diiwaan geliyey Australia.
Ayers Rock, dhagaxii shisheeyaha
Filimkii Kulammada Wajiga Saddexaad (1977) ayaa caan ku ahaa dhagaxan, dhagaxii ugu weynaa aduunka, oo ah meesha muqaddaska u ah aborijiniska Aṉangu magaciisuna yahay Uluru.
Dhismaha dhagaxu wuxuu ka kacayaa 348 mitir dhulka, 863 mitirna wuxuu ka sarreeyaa heerka badda, in kastoo badankood ay yihiin kuwo dhulka hoostiisa ah. Tilmaanta monolith-ka, oo midabbada u beddeleysa sida ay u janjeeraan falaadhaha qorraxda, waxay cabirkeedu gaarayaa 9.4 kilomitir. Dadka dhaqameed ee deegaanka waxay abaabulaan safarro hagitaan ah oo ku saabsan xayawaanka, dhirta deegaanka iyo halyeeyada asaliga ah.
Jidka weyn ee badda
Meel kale oo ka mid ah meelaha caadiga ah ee loogu raaxeysto dalxiiska Australia waa marinka weyn ee badda oo aan waxba looga hinaasin 66 ee Mareykanka.
Wadada weyn ee loo yaqaan 'Ocean Ocean Route' waxay ka timaadaa Melbourne ilaa Adelaide oo ay weheliso xeebta koonfur-bari ee Australia, iyagoo dul maraya badda iyo halyeeyada waaweyn Waxaad mari doontaa inta udhaxeysa biyo-mareenka adoo dhex mari doona keymaha dhirta badan ee Otway National Park waxaad xitaa awoodi doontaa inaad ku aragto nibiriyada magaalada Warrnambool, adoo maraya buuraha Cape Bridgewater ... taxaddar, maxaa yeelay waxaad sidoo kale ku dhaafi doontaa beero canab ah iyo khamriyo khamri Australia ugu fiican. Dhalooyinka aad ku iibsaneysid ka tag marka aad gaarto halka aad u socoto
Xadiiqadda Qaranka ee Kakadu, sawir gacmeedyadii ugu da'da weynaa ee aadanaha
Beerta Qaranka Cockatoo, Waqooyiga, waxaad booqan kartaa oo keliya 100% xilliga jiilaalkaLaga bilaabo Maajo ilaa Sebtember, xilliga roobka suurtagal ma ahan in meelo badan la gaaro. Baaxaddiisu waxay u dhigantaa tan Dawladda Israa’iil waxaana la rumaysan yahay inay ku jiraan 10% kaydka yuraaniyamka adduunka.
Qaybta ugu xiisaha badan ee jardiinadu waa wabiyada daadadka, yaxaasyada badda ku jira iyo yaxaasyada Johnston, kuwaas oo si mahadi ah u seexda maalinta intiisa badan. Waxa kale oo xusid mudan sawirada godadka ee Ubirr, Nourlangie iyo Nanguluwur oo uu ninku si joogto ah u deggan yahay in ka badan 20.000 oo sano.
Tasmania, dalxiiska dalxiiska
Tasmania waa gobol ka tirsan Ustaraaliya, waxay ka kooban tahay jasiiradda Tasmania oo dhan iyo jasiirado yaryar oo ku dhow. Gobolkani wuxuu hodan ku yahay halyeeyada dambiilayaasha, hormoodka, jareyaasha, macdan qodayaasha iyo, dhowaan, dadka u dhaqdhaqaaqa deegaanka.
Dabeecaddeeda aan la daboolin, gastronomy iyo khamrigu way muuqdaan, magaalooyin yaryar oo hawo nadiif ah leh. Xeebta galbeed ee Tasmania waxay ku fiican tahay fasaxyada xiisaha leh, iyadoo hoos u soo dhaceysa duufaannada ka dhaca Webiga Franklin. Waxaan jeclahay fikradda tareenka taariikhiga ah ee ka socda Queenstown.
Meelaha aad kugula talin laheyd ee booqashada ah ee Australia? Miyaad kudari doontaa waxbadan oo kuwa aan soo sheegnay ah? Noo dhaaf khibradaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Dalxiiska Australia
Waxay ahayd waxa ugufiican ee la aado Australia, aad baan u jeclaa aad u muchisisisisisisisimo
Ku jawaab noemi